Tinya Kuti Ubhadhare Zvakachengeteka
Apple yakaunza chinyararire chinhu chitsva chinonzi Tap to Pay pa iPhone. Inobvumira maPhones anowirirana kugamuchira mubhadharo kuburikidza neApple Pay, asingabatike kiredhiti uye makadhi ekubhengi, uye mamwe edhijitari wallet. Asi chikamu chakanakisa ndechekuti hapana imwe hardware inodiwa. Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezve Tap to Pay. Chii chinonzi Tap Kubhadhara pa iPhone? Muna Kukadzi 2022, Apple yakazivisa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Chii chinonzi Apple Tap Kubhadhara uye maPhones angashandise sei kugamuchira mubhadharo?